Rooneey oo ganaax adag dusha loo saaray – SBC
Rooneey oo ganaax adag dusha loo saaray
Xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United ee hogaanka u haysa horyaalka Premiership-ka dalka Ingiriiska ayaa dhabarka loo saarey ganaax ciyaareed oo ah inaanu safan karin laba kulan oo ka mid ah kulamada soo socda ee ciyaaraha Premiership-ka & FA Cup-ka.
25 jirka ka sidoo kale qaranka Ingiriiska ka tirsan ayaa lagu ganaaxay dhaqan xumo uu ku kacay kulankii Man United sida la yaabka leh ay dib uga soo kabatey labadii gool ee ay kala hormareen ciyaaryahanada kooxda ka dhisan bariga magaalada London ee West Ham oo lagu quusiyey 4-2.
Ciyaartaasi sabtidii ka dhacdey garoonka kooxda West Ham ee Upton Park ayaa Wayne Rooney goolkiisii sadexaad ee Hat-trick wuxuu hadal cay oo dhaqaan xumo ah si toos uga horsheegay kaamirada Tv-ga Sky Sports iyadoo kelmadahaasi dhaqan xumada ah ay gaareen 4 milyan oo qof oo xiligaasi si toos ah dunida dacaladeeda uga daawanaysay ciyaartaasi.
Rooney ayaa markii ay dhamaatey ciyaartaasi wuxuu jeediyey raali galin buuxda oo ku aadan kelmada dhaqan xumada ah ee FxxxxxK ee uu jeediyey laakiin taasi ma aanay joojin go’aan ganaax ah oo lagu soo rogo ciyaaryahan Rooneey oo sabtidii badbaadiyey kooxda Man United oo haatan 7 dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka Ingiriiska.
Go’aanka ganaaxa ee ay soo saareen gudiga ciyaaraha ee FA loo yaqaan ayuu Rooney wuxuu haystaa ilaa maanta 6 PM oo uu ka qaadan karo racfaan hadii kale go’aanka ganaaxa wuuxuu meesha ka saarayaa in Wayne Rooney uu safto kulamada Man United ay la yeelanayso kooxaha Fulham & Manchester City kuwaasi oo ka mid ah ciyaaraha Premiership-ka & FA Cup-ka.
Ganaaxa Wayne Rooney wuxuu ku soo aadayaa iyadoo macalinka Man United lagu ganaaxay inaanu cagta soo dhigi karin seeraha tababarayaasha ay ka hagaan ciyaaraha xiliga ay socdaan shan kulan oo ay kooxda Man United ciyaarayso.
Dhageyso Rooney oo ay afkiisa ka burqanayso hadal dhaqan xumo ah http://www.youtube.com/watch?v=13oLcBGGlg0